Fil d'actualités du 21/03/2019
21/03/2019 - 08:30 : ANTALAHA: Olona roa no maty voatifitra nandritra ilay sakoroka niteraka fahamaizan'ny JIRAMA omaly.
Archive du 20180920
Kandida filoha 36 Omen’ny fanjakana mpiambina manokana
Hisy ny fanetsehana mpitandro filaminana hitandro sy hiaro ny ain’ireo kandida miisa 36 mirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena raha ny tatitry ny filankevitry ny minisitra omaly, ka afaka mangataka izany izy ireo.
Fifidianana teto Madagasikara Eny anivon`ny birao fandatsaham-bato no olana hatrizay
Mpikambana 257 avy amin`ny rantsamangaika eo amin`ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) isam-paritra no manaraka ny fiofanana ho an`ny mpampiofana etsy amin`ny Carlton Anosy.
Kandida hiantehitra amin’ny hala-bato Hahita raharaha amin’ny sehatra iraisam-pirenena
Samy manana ny paikadiny ny kandida filoham-pirenena. Mikofokofoka mafy mihitsy saingy iray ihany no hipetraka eo amin’ny toerana faratampony.
Boky mikasika an-dRajoelina Mifangaro amin’ny bokin-jaza
Saika ireo bokin-tsariitatra sy tantara an-tsary avokoa no manodidina ilay boky hitantaran’ny filohan’ny tetezamita teo aloha,
Fikambanana Za’Gasy Ho fantatra rahampitso zoma izay kandidà hotohanany
« Rodoben’ny Zay Gasy Sahy Mandroso » no hoentin’ny fikambanana Za’Gasy tarihin-dRatiarison Jean Navandahy manamarika ny tsingerin-taona faha-2 niorenany ny zoma 22 septambra izao.
Kandida Hery Rajaonarimampianina Tafapetraka ny Foiben-toerany eny Andraharo
Tafapetraka omaly alarobia 19 septambra ny birao vaovao dia ny « QG » na Foiben-toeran’ny Kandida laharana faha-12 Hery Rajaonarimampianina eny Andraharo.
Marc Ravalomanana Hitantana ho amin’ny ho avy mamiratra
Samy milaza azy ho zavatra ny kandida rehetra amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena eo.
Fety sy Famoriam-bahoaka Nikipian’i Dadapasy ny andro sabata
Nikipian’i Dadapasy ny andro sabata natokana ho an’ny fivavahana sy fiombonana any am-piangonana fa dia naleony nafantoka any amin’ny karazana propagandy mialoha ny fotoana, hoy ny fanehoan-kevitra maro samihafa amin’izao fotoana izao.
Distrikan’i Marovoay Faritr’i Boeny Velon-taraina amin’ny hafitsoky ny Depiote Mapar teo aloha
Velon-taraina amin’ny hafitsoky ny depiote teo aloha tany an-toerana izay mpikambana ao amin’ny vondrona Mapar ny olobe sy ny vahoakan’ny distrikan’i Marovoay Faritr’i Boeny ankehitriny.
Mpamokatra fanamiana kandida amin’ny fifidianana Maina ny tsena hatreto aloha
Tamin’ny 5 taona lasa, hoy ny mpamokatra fanamiana kandida amin’ny fifidianana iray na irony mpanao T Shirt irony, iray volana mialoha ny fampielezan-kevitra dia efa saika tototry ny famandrihana T Shirt izahay.
FANDOROANA NY FIARAN’NY PRAIMINISITRA Olona iray no natolotra ny fampanoavana omaly
Olona iray no efa voasambotra ary natolotra ny fampanoavana omaly alarobia 19 septambra nandritra ilay raharaha fandorana fiara mpialoha lalana ny praiminisitra Ntsay Christian teny Ivandry ny herinandro lasa teo.
Tolagnaro Nisy namaky ny biraon’ny CISCO
Nisy namaky ny biraon’ny Cisco-n'i Tolagnaro ny faran'ny herinandro teo iny.Very ireo fitaovana ampiasaina toy ny solosaina boky sy kahie....
Misaona indray ny asa fanaovan-gazety Malagasy Nodimandry omaly i Christophe Haja
Misaona indray ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety eto amintsika. Namoy ny ainy omaly maraina teny amin’ny hôpitaly HJRA Ampefiloha teo amin’ny faha-44 taonany ny namana Rasolonomenjanahary Christophe Haja,
39 e Rallye RIM 2018 Mahatratra 41 ireo ekipazy handray fiaingana anio
Hanomboka anio alakamisy 20 septambra 2018 ao amin’ny faritr’i Fanalamanga any Moramanga ka haharitra 3 andro ny rallye RIM “Rallye International de Madagascar”
Fantanjahantena an-tsekoly 2018 Efa vonona ny rehetra ho any Toliara
Ho tanterahina any Toliara renivohitr’Atsimo Andrefana manomboka ny 28 septambra ka hatramin’ny 07 oktobra 2018 ho avy izao ny fiadiana ny andiany faha-2 amin’ny “Championnats nationaux du sport scolaire 2018”
Aoka izay lava !
Lakolosy izay efa nampanenoina teto izay hidradradradrana fa manjaka eto Madagasikara ny tsy rariny sy ny fahasahiranana amin’ny lafiny rehetra.
Fanairana amin’ny lozam-pifamoivoizana Mikarakara diabe am-pahanginana ny “Media Project”
Be loatra ireo olona namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho teto amintsika. Nahatratra 150 tamin’ny taon-dasa.
Isan’andro dia nanana fandaharam-potoana foana tato ho ato ny avy eo anivon’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI.
Nodimandry omaly maraina i Christophe Haja, mpanao gazety avy ao amin’ny RTA rehefa avy narary tampoka ary naiditra teny amin’ny HJRA.
CUA sy ONG Positive Planète Hanatsara ny fari-piainan’ireo mpaka fako miisa 1.000
Mpaka fako miisa 1.000 eto amin’ny tanànan’Antananarivo no hisitraka ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny ONG Positive Planète International.